Desserts sy zava-mamy any Bali ~ Journey-Assist - matsiro indrindra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Masaka Bali » Desserts sy zava-mamy ao Bali
Desserts sy zava-mamy any Bali (Ny tena matsiro)
7 jona, 2020
Ny tsindrin-tsakafo sy ny hatsembohana
Ny tsindrin-tsakafo malaza indrindra any Bali
Pisang atody (Pisang atody) - akondro voaendy
Bubur injin (Bubur Injin) - fihintsanana ny vary mainty
Martabak manis (martabak manis) mofomamy mamy mamy
Lak-lak (varnish varnish) - fihinanana vary
Pie ronono (pie ronono) - mofomamy ronono
Kue lapis (kue lapis) - mofomamy makia
Surabi (Surabi) - Crepes nentim-paharazana Indonezianina
Pisay atody (Pisang Goreng) - akondro voaendy
Pisay atody - akondro voaendy. Voaomana sy amidy na aiza na aiza
Tena malaza indrindra Pisang Goreng (Pisay atody)Akondro masaka ireny. Ny olona eo an-toerana dia antsoina koa hoe Godoh Gedang.
Ny akondro dia matetika ampiasaina amin'ny kilasy manokana amin'ny Pisang Raja, izay manana tsiro paoma.
Tapaka ireo, manondraka ao anaty batter ary nendasina anaty menaka be dia be. Amin'ny felany, tsara, tena tsara! 🙂
Bush Injin Potsofotsy mainty hoditra
Manana tsiro maro io tsindrin-tsakafo io, fa ny tsiro dia mitovy hatrany. Ao Bali no antsoina hoe Bubur Injin na Injun, any amin'ny ilan'i Indonesia ity dia i Bubur Ketan Hitam.
Bubur Injin - iray amin'ireo sorona matsiro indrindra any Bali
Ny Bubur Engine dia mitovy amin'ny nofon-tsakafo mahazatra izay vita amin'ny vary mainty mangotraka misy ronono sy voaniho. Miaraka amin'ny lasopy, dia tena sarotra ny mahita.
Ireo tia porridge dia aroso mba hihinana amin'ny sakafo maraina - tena mahafa-po sy mahasalama izany.
Pudding mainty hoditra (Bubur Injin)
Martabuck Manis (Martabak manis)
Martabak dia mofomamy namboarina toa marokoroko lehibe. Izy io dia mety ho tsindrin-tsakafo, na sakafo kely. Saingy, noho ny zavatra manankarena sy feno fahafaham-po, dia mety ho lovia lehibe izany.
Martabak manis (Martabak manis) - mofomamy mofomamy mahafinaritra
Ny karazana roa dia fantatra - salty (Martabak telor) sy mamy (Martabak manis). Karazan'ilay famenoana mofomamy mamy: sôkôla (Cokelat), akondro (akondro)Pisang), voanjo (Kacang), fromazy (Keju), sesame (Wijen). Ny famenoana pie amin'ny sira dia misy miaraka amin'ny hen'omby, akoho, atody, tongolobe ary zava-manitra.
Martabuck mofomamy manao horonan-tsary
Fivarotana an-dalambe Martabak no manomboka ny asany, amin'ny hariva. Ao amin'ny lovia toy izany, ny mofomamy iray dia voaomana eo imasonao (fahitana mahatalanjona 🙂). Misafidiana fenoy ary andramo rehefa mafana izany - matsiro!
Nail polish (lak lakana na mofomamy balinese)​
Lacquer (mofomamy Balinese) - fihodinana kely vita amin'ny lafarinina vary, afafy amin'ny voanio, omena siramamy siramamy.
Ny Lacquer dia manana ny fisehon'ny fritters kely. Ny koba ho azy ireo dia vita amin'ny lafarinina vary. Afangaro amin'ny voanio izy ireo ary nafafin'ny siramamy siramamy. Raha ny mahazatra dia fotsy ny pancakes toy izany, fa mety ho an'ny loko hafa, ohatra, ny maitso. Amin'ity tranga ity, ny loko maitso dia ahita amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ravin'ny hazo Pandanus
Lac Lac (lakatra na lakozia mofomamy). Bali
Afaka manandrana ity tsindrin-tsakafo Bali ity toy ny sakafo haingana any amin'ny mpivarotra amoron-dàlana maro eny anaty sarety.
Cincau - Zavamaniry ahitra. Chinchao mazàna dia maizina, saika mainty miloko.
Ampiasaina matetika amin'ny zava-pisotro sy tsindrin-tsakafo izany. Misy mihitsy ny cappuccino chinchau, gilasy, gilasy ary maro hafa.
Ny tsiro dia tena tsy mahazatra tonony sy vao eran'ny. Ny mpankafy jelly sy ny tsindrin-tsakafo no tena tokony hanandrana azy. 🙂
Cincau (Chinchau) - niasa tamin'ny fomba isan-karazany
Pie ronono - mofomamy ronono
Ity dia tsindrin-tsakafo malaza indrindra any Bali. Matetika no mamy sy mahafinaritra tokoa ny tsirony. Toy ny olona tia zava-mamy. Amin'ny maha-mpanentana anao, ny ronono ankasitrahana mamy miaraka amina singa maro be dia be no ampiasaina.
Ny ronono mandry miaraka amina additives isan-karazany
Ny saosy Pai dia azo amidy any amin'ny fivarotana maro any amin'ny nosy. Azonao atao ny manandrana azy any amin'ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana samihafa. Vidiny: manomboka amin'ny 2750 ka hatramin'ny 3000 rupees.
Karazana ronono Pie:
fenitra (Pie ron-nosy tany am-boalohany)
miaraka amin'ny amandy (Pie susu toping kacang almond)
miaraka amin'ny fromazy (pie ronos toping keju)
sôkôlà (pie susu toping coklat)
Sultan miaraka amin'ny raiso (pie ronono ambony kismis)
Kue lapis (kua lapis) - mofomamy boribory
Cue Lapis - mofomamy marevaka. (ny teny hoe lapis dia adika amin'ny teny indonezianina ho sosona).
Kue lapis - mofomamy mitsangana
Kue lapis matetika miaraka amin'ny fametrahana sôkôla na famenoana mahaliana hafa
Ny votoatin'ny kue lapis dia lafarinina vary sy tsaramaso palmie. Amin'ny maha pigment dia ampiasaina ny ravin'ny hazo Pandan.
Nasain'ny Gourmets hanandrana tokoa ity tsindrin-tsakafo ity.
Surabi - Crepes
Surabi - Crepes nentim-paharazana Indonezianina. Azon'izy ireo atao amin'ny endriny farany, noho ny famenoana isan-karazany, ho toy ny làlana mavesatra izy ireo. dia toy izany ny tsindrin-tsakafo.
Malaza be izy ireo ao amin'ny nosy akaikin'i Java, ary tsy dia fahita firy any Bali. Fa raha nihaona ianao, dia manoro hevitra anao ianao hanandrana, tsy hahomby.
Crepes Surabi nentin-drazana nentim-paharazana
Surabi dia vita amin'ny lafarinina lafarinina miaraka amin'ny fanampian'ny ronono. Matetika miaraka amin'ny mamy mamy izy ireo, ohatra, fitetezana malaza - siramamy siramamy voanio.
Vonona izy ireo, mazàna ao anaty lafaoro manokana, nendasina anaty vilany tanimanga.
Surabi Pancake Pots
18.09.2020 / fanehoan-kevitra fandraketana ny Museum Antonio Blanco any Bali. Indonezia tsy misy
18.09.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Ala Monkey Sange any Bali. Indonezia tsy misy
Village any Carcarvers - Mas, Bali, Indonezia
11.09.2020 / Fanehoankevitra 2 ao amin'ny vohitra Wood carvers - Mas, Bali, Indonesia
Village of the Trunyan Maty, Bali, Indonezia
10.09.2020 / Fanehoankevitra 2 ao amin'ny tanànan'ny maty Trunyan, Bali, Indonezia
Dolphin Lodge Bali, Bali, Indonesia
10.09.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Dolphin Lodge Bali, Bali, Indonesia tsy misy
Diving any Pemuteran Bay, Bali, Indonezia
09.09.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Diving any Pemuteran Bay, Bali, Indonezia tsy misy
Ity tsindrin-tsakafo mainty ity dia Bubur Engine tena matsiro! Nefa nihaona tamin'ny voaniho izy ary nihaona amin'ny gilasy. Samy ao amin'ny faritra Ubuda.
Safidy c gilasy somary lafo kely, fa tsy tadidiko ny isa. Ary miaraka gilasy tena mafonja tokoa izany!